4 saacadood oo digniin ah oo aan ka maqnaan karin taleefankaaga Android | Androidsis
On Android waxaan haynaa dhowr barnaamij oo saacad qaylodhaan ah oo wax weyn kaa tari kara si aan kuu toosiyo maalmahan Sebtember oo qofku ku noqdo shaqadiisii ​​iyo waxbarashadiisii, waxaadna moodaa inuu sariirtu lahaa xadhko aan la arki karin oo na xidhi kara si aanaan uga bixin.
Waxaan kuu keenaynaa 4 barnaamij oo saacad qaylo dhaan ah oo beddeli kara barnaamijka aad u isticmaalayso adigoo adeegsanaya Android isla markaana isla afartuba leeyihiin habab kala duwan iyo siyaabo lagu tooso. Laga soo bilaabo barnaamijka midabada leh ee quruxda badan ee waqtiga ku habboon ee loo yaqaan 'SpinMe' gardarrada ah oo kugu qasbi doona inaad hurdada ka kacdo si aad ficil gaar ah ugu qabato taleefanka, si markaa tallaabooyinkaas aad u bilaabi karto inaad ka saarto waxyaabaha dhaxalka ah ee ku dhowaad araggaaga daboolaya.
1 Waqti ku habboon
3 Wareegida Hurdada
Waqtigiisu dhawaan ayuu ahaa waxaa helay Google waana a oo ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee loogu talagalay in aad ka heli doonto Play Store.
Inama wajahno saacad alaarmi ah oo yeelan doonta habab kala duwan oo aan kugu soo toosiyo, howsheeda macno ahaan waa mid fudud, in kastoo haa, isku xirkeeda Waa tan ugu fiican ee aad ka heli karto Android oo waxay leedahay wax kasta oo aad ugu baahan tahay barnaamij ka mid ah qaabkan haddii aad awoodo inaad ku soo toosto digniin caadi ah.
Gabi ahaanba waa bilaash dukaanka Play-ka wuuna taagan yahay ka mid ah astaamaha Smart Rise, 30 daqiiqo ka hor qaylo dhaanta laxanku wuu dhawaaqi doonaa kaas oo kordhin doona mugga oo u adeegi doona inuusan beddelin wareegga hurdada.
AlarmPad-ka waxaa laga yaabaa inuusan laheyn wanaag Waqtiyeed markay tahay qaabka muuqaalka, laakiin waa saacad qaylo-dhaan ah oo aad u dhameystiran oo leh astaamo lagu muujiyo sida salaanta, waqtiga hadda jira, saadaasha hawada, dhacdooyinka kalandarka ama xitaa farriimaha ka dib markii alaarmiga uu daco.
Ikhtiyaarrada sida saadaasha hawada ayaa loo muujiyey inay yihiin kuwo aad u xiiso badan, maaddaama ay kaa soo tooso mooyee, waxay kuu sheegi doontaa heerkulka iyo waqtiga la filayo maalinta, xitaa waxay tilmaamaysaa dhacdooyinka kalandarka. Ma iloobi karno inay siiso taageero DashClock iyo Tasker. Adoo adeegsanaya kordhin Waxaad ku siin kartaa AlarmPad astaamo dheeri ah adoo haysta API horumariyeyaal badan si ay u abuuraan.
Waxaa jira soo degsasho bilaash ah oo ku jirta Play Store laakiin kaliya waxaad haysan kartaa ilaa 5 digniin firfircoon isla waqtigaas oo xayeysiintu way ka muuqan doontaa.
Iyada oo loo yaqaan 'Hurdada Wareegga' waxaan u guureynaa nooc kale oo ah barnaamijyada saacadda alaarmiga hawlgalkeeda awgiis, tan iyo barnaamijkan isku dayi doonaa in la ogaado dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee la sameeyay sariirta adoo adeegsanaya aaladda dareeraha xawaaraha iyo waxaan isku dayi doonaa in sariirta lagaa saaro, ugu yaraan qosol nus maalmahan bisha Sebtember.
Wareegida Hurdada ayaa go'aamin doonta nooca hurdada aad ku jirto Ilaa iyo inta aad taleefanka ku haysato miiska sariirta dhinaceeda iyo waqtiga saxda ahba wuu ku toosi doonaa si baraarujinta ay ugu dhacdo sida ugu macquulsan 30 daqiiqo ka hor digniinta dhawaqa.
Astaamaheeda waxaa ka mid ah meerisyada qaylo-dhaan ee kala duwan ee ay leedahay iyo karti wax looga beddelayo waqtiga inta lagu guda jiro taas oo barnaamijka uu go'aaminayo in isticmaaluhu uu ku jiro wajiga iftiinka ama qoto dheer.
Barnaamijkani ma aha mid bilaash ah waana mid qiimaha 1,49 €.
Kan afraad iyo doorasho aad u daran kuwaas oo aan kaaga keenayno Androidsis si ay kuu kiciyaan.
Spinme ayaa kugu qasbi doonta inaad ka kacdo sariirta waana inaad laba jeer soo jeesataa si qaylo-dhaanta farxadeed u dhawaaqdo. Hadda waad ku ridi kartaa khaanad ama waxaad ku wareejin kartaa barkin, taas oo SpinMe ay sii wadi doonto inay dhawaaqdo illaa aad ka qabanayso ficilka aan soo sheegnay.
Spinme shaqeeyaa mahada gyroscope kaas oo ku dhisan inta badan taleefannada. Sida qaylodhaanta lafteeda, waa wax aasaasi ah oo waad dejin kartaa hal mar oo keliya, adigoon awoodin inaad doorato maalmo cayiman ama digniino kala duwan.
Barnaamijkan waa la abuuray kuwa idinka mid ah ee hurdo dheer qaba wayna kugu adagtahay inaad subaxa hore ka soo toosto tanina waxay kugu abuurtay dhibaato kaa ka daran mid kale oo kaaga yimaada shaqada ama xitaa jaamacada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 4 Saacadaha alaarmiga ee 'Android' si ay si fiican kuugu toosiyo markaad ku noqoto shaqada ama iskuulka